FILAZA - KARAZANA SY FILAZA - ISA
1.- Fanazavana Mialoha:
Amin’ ny Hebreo, ny fandalinana ny “Karazana” sy ny “Isa”, dia voafetran’ireto Fepetra manaraka ireto:
- Roa ihany ny “Filàza-Karazana”, dia: “Lahy” sy “Vavy”.
- Telo kosa ny “Filàza-Isa”, dia: “Samirery” sy “Filàza-Maro” ary “Filàza-Kambana”.
21. Filàza-Lahy Manirey:
Tsy manana famaranan-teny tena mampiavaka azy manokana ny Sokajy Lahy” Filàza-Manirery”. Raisintsika ho ohatra amin’izany ireto teny ireto: הר Har = “Havoana,” , “Tendrombohitra”. Ampitahao amin’ny Fitenintsika Malagasy: “ Harana” ,” Haram-bato”, sns….
Ao koa ny בגד Bêguêdh = “Fitafiana” , “Akanjo”.
22. Filàza-Lahy Maro:
Ny Sokajy Lahy “Filàza-Maro”, no manana Famaranan-teny manokana, noho ny fisian’ny
ים iYm ao amin’ny Teny iray. Ohatra: שירים Shiyriym = Hira Maromaro. ( Azonao an-tsaina ve, fa ny שיר Shiyr eto , no niandohan’ny « Hira » amin’ny Fiteny Malagasy ! ). Ao koa ny מלכים M’lâkiym = Mpanjakalahy Maro.
21. Filàza-Vavy Manirery:
Ny Sokajy Vavy “Filàza-Manirery” kosa, dia tsy maintsy miafara amin’ny ה Hey , ialohavan'ny Renisoratra iray misy Qâmets Lava, zana-tsoratra toy ny T ao ambaniny. Na koa , tsy maintsy miafara amin’ny ת Thav.
Ireo famaranan-teny roa ireo, dia andraisantsika ohatra avy:
- ה Hey. Amin’ity famaranan-teny, dia ao ny שירה Shiyâh = Hira, sy ny תפארת Thiph’êrêth = Voninahitra.
- ת Thav. Amin’ity famaranan-teny faharoa ity kosa, dia ao ohatra ny : ראשת Re’shiyth = Voaloham-bokatra, sy ny מלכות Mal’kouth = Mpanjakavavy.
22. Filàza-Vavy Maro:
Ny Sokajy Vavy “Filaza-maro” kosa, dia miafara amin’ny ות Ôth. Azo raisintsika amin’izany iretsy teny etsy aloha efa nandraisantsika ohatra: שירות Shiyrôth = Hira Maromaro;
מלכות M’lâkôth = Mpanjakavavy Maro.
a)- Misy fepetra vitsy tsara hotadidiana ka hanampy amin’ny fandalinana ireo Famaranan-teny nambarantsika teo, toy ireto manaraka ireto:
- דוד Dôd = Anadahin-dReny , na Rahalahin-dray.
- דודה Dôdâh = Rahavavin-dReny , na Anabavin-dRay.
- דודים Dôdiym = Anadahin-dReny Vitsivitsy , na Rahalahin-dRay Vitsivitsy.
- דודות Dôdôth = Rahavavin-dReny Maromaro , na Anabavin-dRay Maromaro.
Nota Bene : Iray ihany ny tiantsika ambara amin’ny hoe : Vitsivitsy na Maromaro, fa ny hanomezana endrika ny fomba fanoratra.fotsiny(Rév.Dr.Ch.R.).
b)- Misy ankoatr’izany, ny tsara ho fantatra, dia ireto :
i)- Amin’ny “Filàza-Maro”, dia betsaka ny “Anaran-dahy”, kanefa dia manana famaranan-teny “Vavy” koa.
ii)- Torak’izany koa, maro amin’ireo “Anaram-bavy”, no manana famaranan-teny “Lahy” .
Raisintsika ho ohatra amin’izany ireto santionany ireto
Lahy : אב Âb na Âv = Ray na Ikaky = Tokana.
אבות Âbôth , na Âvôth = Ray na Ikaky = Maro.
Vavy : שנה = Shânâh = Taona = Iray, na Herintaona ..
שנים = Shâniym = Taona = Maro.
3.- Filàza-Kambana :
Miafara mandrakariva amin’ny אם ‘Aiym ( Alohan’ny Yodh sy ny Meym dia misy Patah ao ambanin’ny Reni-soratra alohan’io Famaranan-teny ) , izay tsy ikambanany amin’ny hafa rehetra ny Teny « Filàza-Kambana ». Ohatra ity :
רגלים Rag’laiym = Tongo-droa = Tongotra Roa.
4.- Fanazavana Samihafa :
i)- Ankoatr’io voalaza eo aloha eo io, dia tsy vitsy amin ‘ny “ Anarana” no sady manana “Filàza-Maro, no manana “Filàza-Kambana” koa. Izany hoe, ny “Filàza-Kambana” amin’izay dia
tsy hafa fa fanasongadinana ny “Anaran-tsamirery”. Ohatra:
רגלים Rag’laiym = Ny Tongotra Roa = Tongodroa.
רגלים R’gâliym = Ny Fivezivezena Matetika = Ny Fandehandehanana Tsy Misy Farany = Dia Betsaka ataon’ny Tongotra , izany hoe “Tongotra” no Fototeny eo.
ii)- Misy fanehoana “ Anarana” sasany izay tsy ampiasaina raha tsy amin’ny “Endrika Samirery” ihany. Ohatra izao: תבל Thebel = Izao Tontolo Izao.
Misy koa anefa tsy miasa raha tsy amin’ny « Filàza Maro » ihany. Ohatra : מים Maiym =
Ny Teny sasany « Filàza-Samirery », dia mety hanana hevitra « Ikambanana », na « Iombonana » , na « Iraisana ». Ohatra: צץ Rets = Hazo (Tokana) , na Hazo (Maromaro). Samy azo ilazana azy ary ny “Tokana” , nefa koa “Maromaro”, na dia teny iray ihany aza.